Hetsika lehibe fandikan-teny Shinoa: Mampihanjahanja propagandy Shinoa sa manaparitaka fankahalana? · Global Voices teny Malagasy
Hetsika maohitra ny fampielezan-kevitra Sinoa antserasera
Voadika ny 29 Marsa 2022 5:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Esperanto , Español, English
Pikantsary avy amin'ny Kaonty Twitter an'ny The Great Translation Movement. Ankavia: fanehoan-kevitry ny mpiserasera Shinoa momba ny Krizin'i Okraina; Ankavanana: lahatsary iray nitafatafa tamin'ny ankizy Uighur momba ny fianaran'izy ireo.
Vao haingana ny Reddit, iray amin'ireo sehatra media sosialy anjotra malaza indrindra no nanaisotra fantsona Shinoa (subreddit) “Chonglang TV” taorian'ny nanombohan'ireo mpisera hetsika antsoina hoe “ny fandikan-teny lehibe.”
Niala tao amin'ny Reddit avy eo ireo mpiserasera miteny Shinoa ary nitondra ny hetsika ho any amin'ny sehatra sosialy hafa, ao anatin'izany ny Twitter, Facebook, Instagram ary Telegram mitondra tenifototra, #TheGreatTranslationMovement (#大翻译运动). Ny tanjon'ny vondrona dia ny hanatsikafona ny fomba fijerin'ireo Shinoa tia tanindrazana mahery fihetsika sy hanohitra ny propagandy Shinoa amin'ny fandikana votoaty misy olana avy amin'ny teny Shinoa.
Nipoitra tampoka ny hetsika fandikan-teny tamin'ny faran'ny volana Febroary rehefa nanomboka nandika sy nanakiana ireo adihevitra tao amin'ny media sosialy Shinoa momba ny krizy any Okraina ny sasany tamin'ireo shinoa mpisera Reddit tao amin'ny “Chonglang TV”, anisan'izany ny fiantsoana vazivazy mamoafady milaza vehivavin'i Okraina mialokaloka any Shina amin'ny alalan'ny fanambadiana lehilahy Shinoa. Taorian'ny fanoherana an-jotra, niditra an-tsehatra ny fampielezan-kevitra Shinoa mba hanakanana ireo vazivazy.
Nanomboka teo, maro ireo mpisera Reddit Shinoa nanokana ny tenan'izy ireo handika ny fomba fijerin'ny media sosialy Shinoa ny krizy ao Okraina. Na izany aza, rehefa nanomboka nisarika ny sain'ny besinimaro ny ezaka, dia nakaton'ny Reddit tamin'ny fiandohan'ny volana marsa ny fantsona “Chonglang TV”, izay nanana mpikambana maherin'ny 53.000, noho ny fiahiahiana manokana momba ny fiainana manokana — naharihary tao amin'ilay fantsona ny mombamomba ny mpiserasera Shinoan'ny Tanibe iray mpanohana Rosiana.
Nahangona mpanjohy maherin'ny 15.000 tao anatin'ny telo herinandro latsaka ny kaonty Twitter ofisialin'ny Great Translation Movement. Amin'ny ankapobeny, mamoaka lahatsoratra 5-10 isan'andro manasongadina ireo Sinoa tia tanindrazana an-tserasera na ilay antsoina hoe fanehoan-kevitra mifangarika “Little Pink’s” ny raharaha ankehitriny, sy ny vaovao iraisam-pirenena ary ny zava-nitranga an-jotra ilay kaonty. Ity ambany ity ny ohatra iray miavaka amin'ny lahatsoratra navoakan-dry zareo:
Raha tsy misy ny fanohanan'i Shina an'i Rosia, dia tsy ho nisy ny ady, avelao andeha araka izay alehany ny tohiny avy eo
Nahasarika ny fifantohan'ny Global Times, iray amin'ireo fampahalalam-baovao lehibe tohanan'ny fanjakana Shinoa avy eo ny hetsika anjotra. Lahatsoratra fanehoan-kevitra avy amin'i Wang Qiang, mpaneho hevitra manana fahaizana ara-miaramila niantso ny hetsiky ny mpiserasera ho anisan'ny “Revolisionan'ny Loko”, hetsika hanova ny rafitra ara-politika antoko tokana ao Shina.
Tsy mitovy amin'ireo fampielezan-kevitra manoso-potaka ny vahoaka Shinoa, manome tsiny ny governemanta Shinoa noho ny fitondran-tena ratsy ataon'ireo mpiserasera Shinoa ity fampielezan-kevitra ity… manoso-potaka ny governemanta Shinoa amin'ny alalan'ny fanaratsiana ny vahoaka Sinoa izany ary ny tanjona faratampony ny hanatontosa ny “Revolisiona Loko” ao Shina.
Ankoatra ny fanakianana avy amin'ny famoaham-baovao ofisialy Sinoa, naneho ny ahiahiny ihany koa ireo Shinoa mpiserasera sasany any ampitan-dranomasina fa ny fandikana ny kabary fankahalàna ao amin'ny media sosialy Shinoa dia hiteraka fihetseham-po manohitra ny Shinoa eo amin'ny fiarahamonina tandrefana. Ohatra, naneho hevitra ny mpisera Twitter @jeeplakeside:
Ny tanjon'ilay antsoina hoe Hetsika Lehibe Fandikan-teny dia ny hanamafy sy hizara fankahalana. Tsy liam-pandrosoana izy io, manana ny tanjony manokana ary mikendry vondrona ara-poko iray manokana. Tsy ho an'ny Shinoa ihany anefa ny voka-dratsiny fa ho an'ny vahoaka Aziatika rehetra. Tena ratsy ny hevitr'ilay mpamorona azy.
Na izany aza, nilaza i Chang Ping, mpanao gazety Shinoa menavazana an-tsesitany, fa tsy manohitra ny vahoaka Shinoa ny hetsika Fadikanteny Lehibe, fa milina fampielezan-kevitra sy sivana izay mamokatra “matotoa (zombie)” tia tanindrazana marobe na antsoina hoe Little Pinks:
Ahoana ny fomba hanoherana ireo matotoa? Mety hisy ny afaka hanova ny vitsy amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra. Fa ny fomba tsara indrindra dia ny manala ny odin'izy ireo. Matahotra ny tara-masoandro ny matotoa, izany no nahatonga an'i Rosia, Shina ary Korea Avaratra nametraka sivana henjana amin'ny aterineto.
Manohana ny hetsika ihany koa i Cai Xia, mpampianatra misotro ronono tao amin'ny Sekoly Foiben'Antoko (Central Party School- CCP):
Manohana ny Hetsika Lehibe Fandikan-teny natomboky ny mpiserasera aho. Tsy vitany hoe mampiharihary ny fomba fanapoizinan'ny didy jadona CCP ny vahoakany amin'ny foto-kevitra misy poizina sy nanodina ny fiheveran'izy ireo sy ny fahatsapan'izy ireo ilay fandikan-teny, fa mampatsiahy koa ny governemanta sy ny vahoaka avy amin'ny firenen-kafa mba hitandrina manoloana ny fanaparihana vaovao diso sy ny fampielezan-kevitra ataon'ny CCP – sy ny fomba fampiasany ny vaovao diso mba hanodinana ny hevi-bahoaka. Manoloana ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina, manampy an'i Potinina amin'ny adim-baovaony ny vondrom-pahefan'i Xi.
Nilaza ireo mpiserasera sasany fa tokony handinika sy hanome teny mifandraika bebe kokoa ho an'ny fandikan-teny ireo mpikarakara ny Hetsika Lehibe Fandikan-teny mba hisorohana ny fiparitahan'ny fankahalana ny vahoaka Shinoa.
Ny hafa indray mihevitra fa miteraka olana ho an'ny manampahefana Shinoa misahana ny sivana ny ezaka fandikan-teny. Izany hoe, raha manivana votoaty misy olana avy amin'ny Little Pinks izy, dia mety hiala ireo mpanohana sasany; raha tsy miraharaha azy ireo kosa ny manam-pahefana, dia manaiky an-tsokosoko azy ireo.
Manoloana ny olana toy izany, Wang Qiang avy amin'ny Global Times milaza fa tokony hanamafy ny ekipany mpandika teny sangany ny fampielezan-kevitra Shinoa mba hanaparitaka tantara miabo (tsara) momba an'i Shina.